Google dia manampy fiasa vaovao hankafizanao ny audiobooks | Vaovao momba ny gadget
Google dia manisy fampiasa vaovao hankafizanao ny audiobooks anao
Tamin'ny fiandohan'ity taona 2018 ity, Google dia nanome ny marika fanombohana ny fanolorantenany audiobooks. Nanokatra ampahan'ny boky notantaraina tao amin'ny Google Play store izy io ka nahatonga ny boky hahatratra olona maro kokoa. Roa volana taty aoriana, Google manampy fampiasa vaovao hankafizana, bebe kokoa aza, ireo lohateny ireo.
Ny audiobooks an'i Google dia tsy ampy fanatsarana sasany hahafahany mankafy ny lohateny amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, hita fa mandeha tsara ny Internet goavambe ary nohatsaraina ny zavatra niainan'ny mpampiasa miaraka amina fiasa vaovao ahafahanao mankafy amin'ny Android sy iOS.
Ny voalohany tokony ampiana dia ilay antsoina "Smart Resume". Ity asa ity dia hanao aza adino mihitsy ny kofehy amin'izay rehetra henonao momba ilay tantara asitrika anao. Inona koa, rehefa mampiasa finday avo lenta hanaovana izany dia mety misy fahatapahana mihoatra ny iray mandritra ny fitantarana (antso sasany, fampitandremana, sns.) Amin'ity tranga ity, ity endri-javatra vaovao ity dia hamerina amin'ny fomba hendry ny teny farany henonao momba ny tantara.
Faharoa hanana izany isika hanana ny tsoratadidy na «Tsoratadidy». Ary ny fahaizana mametraka marika amin'ireo andalana izay nanisy marika indrindra antsika tamin'ny tantara iray hamelomana azy ireo, dia tsy voavidim-bola. Ary kely kokoa ho an'ireo izay zatra mitondra pensilihazo sy taratasy foana.
Fahatelo, manana ny fahafaha-mampiditra audiobooks Google amin'ny fanazaran-tena isan'andro izahay mandeha ho azy ny famakiana - na ny fihainoana - amin'ny Google Assistant. Izany hoe, ny mpanampy virtoaly Google dia hampiditra ny audiobook ho zavatra isan'andro amin'ny maraina. Azonao atao koa ny mampitombo na mampihena ny hafainganam-pitenenana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, ny audiobooks novidinao tao amin'ny Google Play azonao zaraina amin'ny maha-fianakaviana. Hetsika izay efa nananan'i Apple nandritra ny fotoana fohy teo amin'ireo asany amin'ny fizarana atiny ao amin'ny kaontim-pianakaviana. Izany dia azo atao noho ny fiasa "Tranombokin'ny fianakaviana" o Tranombokim-pianakaviana ary tafiditra ao amin'ny firenena 13, ao anatin'izany i Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Google dia manisy fampiasa vaovao hankafizanao ny audiobooks anao
Ity teknolojia laser ity dia afaka mamorona feo tsy ho aiza
Tess, fanadihadiana an-habakabaka izay hanampy an'i NASA hitady fiainana amin'ny exoplanets 20.000 XNUMX